काठमाडौँ मंसिर ३ आगामी मंसिर ३ गते करिब ६ शताब्दी यताकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । नोभेम्बर १९ मा लाग्ने यो चन्द्रग्रहण सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हुनेछ । पछिल्लो ५८० वर्षमा पहिलो पटक यति लामो अवधिको चन्द्रग्रहण लाग्दैछ ।यो पटकको चन्द्र ग्रहणमा चन्द्रमाको ९७ प्रतिशत भाग ढाकिनेछ । जो दिउँसो करिब साढे १ बजे उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ । यो चन्द्रग्रहण ३ घण्टा २८ मिनेट २४ सेकेन्ड लामो हुनेछ ।५८० वर्ष यता यति लामो अवधिको चन्द्रग्रहण लागेको थिएन । यसअघि सन् १४४० को फेब्रुअरी १८ मा सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । अब यति लामो चन्द्रग्रहण ८ फेब्रुअरी २६६९ मा मात्र लाग्नेछ । यो चन्द्र ग्रहण एसिया, अमेरिका, उत्तरी युरोप, अस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र लगायतबाट देखिनेछ । यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौं- करीब दुईतिहाइ मत ल्याएर पनि सरकार चलाउन असमर्थ रहेको पहिलाको
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस चलिरहको छ । यसैबीच हमानायक राजेश हमालले पनि एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महानायक हमालले सोसल मिडिया फेसबुकमार्फत् एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सडकदेखि सदनसम्म नै एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको समयमा महानायक हमालले पनि एमसीसी लागू गर्न नहुने बताएका छन् । फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गर्दै हमालले नेपाली जनता नै एमसीसीको विरुद्धमा भएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने बताएका हुन् । उनले अमेरिकाको बिग्रँदो छविका कारण नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्धमा भएको र जनतालाई मान्य नहुने एमसीसी लागू गर्न नहुने बताएका छन् । सार्वजनिक भिडियोमा हमालले भनेका छन्, ‘अहिले जल्दोबल्दो विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अमेरिकाको सहयोग न
टिकटकमा भाईरल भएकी गोमा ज्ञावाली युटुबमा पनि भाईरल भएकी छिन् । सारीवाली नामले चिनिएकी बुटवली गोमा टिकटकमा ७ लाख भन्दा बढि फलोअर्स कमाउँदै अगाडि बढिरहेको समयमा शिशिर भण्डारीसँगको युटुब कुराकानी पनि अहिले नेपालको टैण्डिँग नँ १ मा छिन् । उनीसँग शिशिरको कृुराकानीलाई धेरैले रुचाएपछि पछिल्लो समय ट्रेण्डिँग एक मा एकछत्र राज गरिरहेको प्रकाश सपुतको गीत कुरा बुझ्न पर्च पछि तल झरेको हो । धेरैले उनको मिठो कुराकानी र मिठो हाँसोलाई मन पराएका छन् । गोमा पनि आफुलाई अन्तर्वार्ता पनि दर्शकहरुले रुचाएपछि खुशी छिन् । धेरैले अब ट्रेण्ड अनुसार के गोमा म्युजिक भिडियो अभिनयमा आउलिन् त भन्ने कौतुहलता जनाएका छन् । बुटवलकी गोमालाई सानै देखि नृत्यमा रुचि थियो तर उनी आफुलाई नृत्यमा पारँगत भने मान्दिनन् । व्यवसायको रुपमा उनको सारी पसल पनि छ । परिवारको सपोर्टमा टिकटकमा पनि अघि बढिरहेकी गोमा आफ्नो पसलमा आएका सार
नायिका श्वेता खड्कालाई निकै लामो समयपछि हामिले सामाजिक संजालमा खुसि भएको देख्न पाइरहेका छौ । कहाँ भेटिएला, कोहिनुर, कान्छी, लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेरकी सामाजिक अभियन्ता समेत रहेकी नायिका श्वेताले धनगढीका प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गरिन ।यो उनको दोस्रो विवाह हो । केही वर्षअघि दोस्रो विबाहका बारेमा इन्कार गर्दै आएकी श्वेताले पछिल्ला दिनहरुमा भने अब आफू एकल बस्न गाह्रो भएको भन्दै श्रि कृस्न उपर एउटा भावपुर्ण स्ट्याटस समेत हालेकि थिइन् ।त्यसपछि उनले अन्ततः बिवाहमा नै निचोड निकालेर यशलाई नै आफ्नो गुमेको हासो फर्काउन सकिने आश बोकेर बिजेन्द्रसग गासिन पुगिन्। श्वेता र विजयन्द्र केही समयदेखि प्रेममा रहेको चलचित्र वृत्तमा चर्चा भए पनि उनले अस्विकार गर्दै आएकी थिइन् । श्वेताले २०७१ असार २३ गते अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको महिनादिनमै श्रीकृष्णले यो संसार
काठमाडौं–नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । उनका बुबा प्रेम घिमिरेका अनुसार निशाको पुनः उपचार सुरु गरिएपछि उनको स्वास्थ्यमा पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । ‘पहिला उसले केही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुँदैछ । म हिजो हस्पिटल गएर ‘छोरी के छ ? भनेर सोधेको थिएँ । उसले ‘हा’, ‘हो’ गरेर रुन खोजी’, प्रेमले भने, ‘म घर जान्छु, यहाँ भाइ बसेको छ भनेर फर्किएँ । सोचेभन्दा राम्रो सुधार भएको छ ।’ प्रेमले छोरीको अनुहार ‘फ्रेस’ देखिएको खुलाए । ‘छोरीको अनुहारमा चमक आएको छ । उसको अनुहार हेर्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नेमा परिवार आशावादी छौं’, उनले खबरहबसँग भने, ‘दुर्घटनापछि छोरी मुढा जस्ती भएकी थिइन् । बोल्ने अवस्था पनि थिएन । अहिले ‘हा’, ‘हो’ गरेर भए पनि बोल्ने भएकी छन् ।’ तीन वर्षअघि मोडलिङ पढ्न भारतको देहरादु
किम्बदन्ती अनुसार एक दिन गाई चराउन गएको गोठालोले आफूसित लगेको रोटी जब पोखरीको किनारमा बसी खान खोज्दा जति पल्ट रोटी निकालेर खान खोज्यो उति पल्ट उसका सबै रोटी तलाउमा झरे, अनि उ आफै तलाउमा हामफालेर हेर्छ त उसकी स्वर्ग बासी आमा पो उक्सा रोटी जति सबै हातमा लिएर बसेको देखेरे गोठालोले कर गर्‍यो आमालाई आफैसित घर लान । आमा मानिन्न गोठालो ले पनि जिद्दी कस्यो आमालाई घर नलिइ जान्न भनेर ।अनि आमाले केही सिप नलागे पछि प्रत्येक वर्ष आजकै दिन आफू यही पोखरीमा आउने र दर्शन दिने बताए पछि गोठालो घर फर्कियो । अनि गाँउ भरिका मान्छेहरू प्रत्येक वर्ष उक्त तलाउमा ज्यादै आफ्नी स्वर्ग बासी आमाको दर्शन गर्न थाले र त्यही दिनलाई मात तीर्थ औली को रूपमा मनाउन थाले । कालान्तरमा एक वर्ष एउटी नारी धेरै समय सम्म प-खँदा पनि आमाले दर्शन नदिएर उक्त तलाउमै हाम फालेर मरिन त्यस बर्सबाट आमाको तस्बिर तलाउमा देखिन छाडेको किम्बदन
वीर अस्पताल लगाएत काठमाडौं उपत्यकाका प्रायः सबै कोभिड अस्पतालमा अहिले को’रोना संक्रमितको चाप थेगिनसक्नु छ । आफन्तको आकांक्षा पूरा गर्न चिकित्सकलाई हम्मे परिरहेको छ। सरकारी अस्पताल होस् वा निजी, सबैले आफ्नो क्षमता भन्दा माथि नै को’रोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा को’रोना संक्रमितलाई बेड मात्र नभई केहीथरी औषधिको पनि संकट पर्ने देखिएको छ । यही अनुपातमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए उपत्यकाका जेनेरल अस्पतालले को’रोना सं’क्रमितका लागि सबै बेड छुट्याए पनि धान्न कठिन पर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ । यो भनाइबाट सरकारले महामारी नियन्त्रणमा हात उठाएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका सहित २२ जिल्लामा संक्रमण फैल
हिन्दु धर्ममा सिन्दुर विवा’हित महिलाहरुको विवाह’को प्रतिक हो। तर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की आखिर विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनुको पछाडिको कारण के छ ? मान्यता’अनुसार सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनाले प’तिको दिर्घायु हुने र महिलाको सौभाग्यमा वृद्धि हुन्छ। आखिर महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर किन भर्छन त ? आउनुहोस, थाहा पाईराखौं यसको पछाडिको धार्मिक मान्यता। एक पौराणिक कथाका अनुसा’र धीरा र वीरा नामक एक युवा युवती थिए। धीरा एक युवती थिइन् जो अति नै सुन्दर र फुलझैँ कोमल थिइन् त्यस्तै वीरा निकै नै साहसी पुरुष थिए। यी दुईका जोडी अति नै मनमोहक थियो। यदि कोहि यिनीहरुलाई देख्थे त् उनीहरुको जोडी आफ्नो मन मष्तिसकबाट हटाउन सक्दैन थे। दुवै एकअर्काका लागि बनेका थिए र एकअर्काका लागि उचित थिए। काला’न्तरमा दुबैले विवाह पनि गरे। यसै क्रममा एकदिन यी दुई शिकारमा निस्किए त्यसैबखत एक कालिया नामक दानवको गिद्दे
चर्चित टेलिभ’जन प्रस्तोता रवि लामि’छानेले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडेसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम विवादमा परेको छ । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम प्रशारणलाई न्यूज २४ टेलिभि’जनले जारी राख्ने बताइरहेका बेला रवि लामि’छानेले पनि सोही कार्यक्रम गर्ने भन्दै आफ्नो गुनासो टि’पाउन सम्पर्क नम्बर सार्व’जजिक गरेका छन् । गत बिही’बार ला’मिछानेले न्यूज २४ टेलि’भिजन छाडेका थिए । बिहीबार न्यूज २४बाट रवि बाहिरिएसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’को कपिराइट विवा’द हुने देखिएको हो । बिहीबार न्यूज २४ बाट बाहि’रिँदै गर्दा लामिछा’नेले आफूले तयार पा:रेको भिडि’ओ रिपोर्ट न्यूज २४ ले काटेर प्रशारण गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । यसप:छि लामिछानेका समर्थकहरु आक्रो’शित भए’का थिए । कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आए पनि सो कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछाने भने मौन छन् । उनले यस विषयमा अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया